Wamukelekile Ibhulogi Lokumaketha I-imeyili Umxhasi Delivra! | Martech Zone
Wamukelekile Ibhulogi Lokumaketha I-imeyili Umxhasi Delivra!
NgoMsombuluko, Okthoba 3, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Lokhu bekuyinyanga eyinselele futhi kuyinyanga emangalisayo kuMartech! Sivale uSepthemba ngokukhula okungama-233% ngaphezu kukaSepthemba odlule kubhulogi futhi siyaqhubeka nokuthola ithoni yokuvezwa kwemboni. Kanye noxhaso lwethu lobuchwepheshe beZoomerang (vakashela i- amathiphu okuhlola online!), sijabule ukumemezela iDelivra njengomxhasi wethu we-imeyili Marketing!
UDelivra ungomunye wabokuqala izinkampani zokuthengisa nge-imeyili futhi usanda kuqanjwa igama elithi Inc. 5000! Umklomelo uhlonipha ikhono likaDelivra lokukhiqiza imali engenayo ngenkathi uphatha ibhizinisi elikhulayo futhi wenza amasu ebhizinisi aphumelelayo.
Leli yithuba elimangalisayo kubo bobabili uDelivra kanye Martech Zone. Isungulwe ngonyaka we-1999, iDelivra inegama elivelele embonini ngokuba yinkampani leyo uyabakhathalela abathengi bayo futhi njalo yenza okulungile. IDelivra iyi- ibhizinisi elingenazikweletu, elizimele nelisebenza etholakala enhliziyweni yeMidwest - nalawo manani asezansi we ukwethembeka, ukwethembeka nokusebenza kanzima kugcwale inhlangano. Abanabo abantu abanolaka, abaphoqayo abathengisayo… abasebenzi nje abanakekelayo abaqinisekisa ukuthi izidingo zakho ziyanakekelwa futhi nezidingo zakho zokumaketha nge-imeyili ziyahlangatshezwa futhi zeqiwe.
Emasontweni ambalwa alandelayo sizothutha incwadi yethu yamasonto onke (bhalisa ngenhla) iye eDelivra futhi singabheka nokwenza ukuhlangana okuhle nabo esizodedela umhlaba! Futhi, sizoba nama-blogger ambalwa eDelivra ebhodini azoletha amathiphu amaningi wokuthengisa we-imeyili kanye nemikhuba emihle!
Uma uyinkampani yezobuchwepheshe bokumaketha futhi unentshisekelo ekuxhasweni nathi, siseneziteshi ezithile ezivulekile: Ama-Analytics, CRM, eCommerce, Ukukhangisa Kwamaselula, Social Media, Ukukhangisa Okuqukethwe, Futhi WordPress uxhaso luvulekile!
Ukulungiselela Abasebenzi be-2020
Ucwaningo lweMakethe olungabizi oluvela kumathuluzi eMakethe
I-Oct 3, i-2011 ku-4: i-47 PM
Ngiyabonga, Doug! Siyajabula ukujoyina umndeni we-Marketing Tech!
I-Oct 3, i-2011 ku-4: i-52 PM
Sawubona! Ngiyakwazi… 🙂
Okthoba 4, 2011 ngo-9: 14 AM
Iqembu elikhulu laphaya eDelivra! Ngiyajabula ukukubona usebenza nabo uDoug. Ngibheke phambili ekuboneni imiphumela yokuphela…